आध्यात्मिक रुपले घरको शुद्धि
१ . परिचय – वास्तुमा नकारात्क तरङ्ग तथा बाधित (तर्साउने) हुनुको कारण
आध्यात्मिक अनुसन्धानले प्रकट गरेको छ कि संसारभरि प्रत्येक वास्तुमा कुनै न कुनै प्रकारको नकारात्मक तरङ्ग हुन्छ ।
यी नकारात्मक तरङ्ग धेरै कारणहरुले हुन्छन् जस्तै
के उनीहरु साधना गरिरहेका छन्?
के साधना, साधनाको ६ मूलभूत सिदान्त को नियमानुसार छ?
निवासीहरूको मानसिक स्वरुप कस्तो छ?
कुन उद्देश्यको लागि परिसर (वास्तु) प्रयोग गरेको छ?
वास्तु – घरको निर्माण कसरी गरेको छ, घरको सफाई, घरमा भएको वस्तुहरू र वस्तुहरुलार्इ कसरी राखिएको छ ।
घर निर्माण भएको भूमि
वरपरको क्षेत्र (परिसर)
अझ महतत्त्वपूर्ण कुरा, यी नकारात्मक तरङ्गहरुले भूत (राक्षस, दानव, नकारात्मक शक्ति) अथवा पूर्खाको लिङ्ग देहलार्इ आकर्षित गर्दछ । तल दिएको आकृतिमा अनिष्ट शक्ति एवं पूर्खाहरुको लिङ्ग देह आकर्षित गर्ने सबै घटक तथा तिनीहरुको आैसत प्रतिशत देखाएको छ ।
उदाहरणार्थ, यदि घरमा रहने व्यक्तिहरुमा अनेक स्वाभावदोष छन् जस्तै – क्रोध, लोभ, व्यसन आदि तब अनिष्ट शक्ति एवं पूर्खाको लिङ्ग देहलार्इ आकर्षित गर्दछन् । यसै गरी यदि परिसरको उपयोग व्यसनको लागि अथवा तामसिक गीतको लागि गरिएको छ भने अनिष्ट शक्ति आरकर्षित गर्दछ । यसबाहेक हाम्रो ६० प्रतिशत पूर्वज (पूर्खा) मृत्युपछि भूलोकसँग जोडिरहन्छ । त्यस मध्य ५० प्रतिशत पूर्खा आफ्नो प्रिय स्थान (पैतृक निवास), प्रिय वस्तुको छेउछाउ घूमि रहन्छ अनि बाकि ५० प्रतिशत आफूलार्इ मन पर्ने व्यक्तिको आसपास रहन्छ । पूर्खाहरु जो भूलोकसँग जोडिरहेको हुन्छन् उनीहरुले आफ्नो वंशज तथा पैतृक निवासमा रहनेहरुलार्इ कष्ट दिन सक्छन् ।
सन्दर्भको लागि पढ्नुहोस् – मेरो पूर्खाले मलार्इ किन कष्ट दिन्छ ?
यस्तो पाएको छ कि धेरै व्यक्तिहरु कष्टदायक स्पन्दनबाट अनभिज्ञ हुन्छन् किन कि उनीहरु स्वयं नै अनिष्ट शक्तिको दुष्प्रभावले ग्रस्त हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुमा अनिष्ट शक्तिको आवरण (आैसत ४ से.मी.) हुन्छन् एवं उनीहरुको छैटौं इन्द्रिय कार्यरत नभएको कारण अनिष्ट शक्तिको उपस्थितिको कारण उत्पन्न यी सूक्ष्म कष्टको सन्दर्भमा उनीहरु संवेदनहीन हुन जान्छन् ।
यो एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं, जस्तै चिकित्सालयमा चिकित्साकर्मिहरुलार्इ आैषधि एवं कीटाणुनाशको गन्धले कुनै कष्ट हुदैन्न्, यस्तै गरि कालो शक्तिको आवरण (रज-तम) ले युक्त व्यक्ति यस्तो स्थानमा अधिक राम्रो अनुभव गर्दछ जहाँ रज-तम युक्त गतिविधिहरु हुन्छन् । जस्तै शराबी व्यक्ति जो आविष्ट छ उनी प्रसन्न हुन्छ जब उनको बरिपरि अधिक शराब ल्यार्इ दिन्छ ।
२. निवाशलार्इ बाधित गर्ने अनिष्ट शक्ति एवं नकारात्मक तरङ्गलार्इ कम गर्ने उपाय
तलको तालिकामा परिसरलार्इ आध्यात्मिक शुद्धि गर्नको लागि विभिन्न उपायको तुलनात्मक महत्व देखाएको छ ।
परिसरमा रहने व्यक्तिहरुको साधना ३०
परिसरमा रहने व्यक्तिहरुको सौम्य व्यक्तित्व ३०
स्थानलार्इ शुद्ध गर्ने विधिहरु १४
सन्तको आगमन १०
ढोका र झ्याल खुल्ला राख्ने २
परिसरमा विद्यमा दोष अथवा त्रुटिहरु हटाउदा सूक्ष्म तरङ्गहरुमा योगदान २
शक्तिहरुको साथ अनुसन्धान नगर्ने जस्तै आैजा बोर्डको उपयोग गर्ने २
अन्य (जस्तै तुलसीको सात्विक विरुवा लगाउने अदि) १०
टिप्पणी : कुनै पनि अनिष्ट शक्तिद्वारा ग्रस्थ स्थानको आध्यात्मिमक स्वच्छता गर्नको लागि निम्नलिखित प्रभावकारी साधन हुन् :
एसएसआरएफ द्वारा निर्मित घूप जलाउने
पवित्र जल (तीर्थ) छर्किने
माथी उल्लेख गरेको उपायको प्रभाव त्यस समय अधिक हुन्छ जब दैनिक साधना गर्दै आस्था एवं भावको साथ गरिन्छ । परिसरको अध्यन गर्ने विज्ञान एवं फेंगशुर्इ जस्ता उपाय अनिष्ट शक्तिद्वारा तर्साउने हटाउनमा सीमित भूमिका रहन्छन् । दुवै पद्धतिद्वारा सुझाएको निर्माणसँग सम्बन्धित परिवर्तन गर्नुको अपेक्षा आध्यात्मिक शुद्धि गर्नको लागि माथि बताएको दर्इ विधिहरु अधिक प्रभावी तथा अधिक लाभप्रद हुन्छ । यति मात्र गर्दा पनि केवल सानो अनि कम शक्ति भएको अनिष्ट शक्तिहरु आध्यात्मिक शुद्धि गर्ने विधिबाट हटेर जान्छ । तल दिएको तालिकामा अनिष्ट शक्ति हटाउनको लागि गरिएको आध्यात्मिक उपायमा गरेको आध्यात्मिक अनुसन्धानको परिणाम प्रस्तुत गरेको छ ।
भूत बाधाको प्रकार
वास्तविक ३० ०३
काल्पनिक ३० ३०
अन्य ४० १०4
हामीले भूतले तर्साउने तीन प्रकारले वर्गीकृत गरेका छौं ।
वास्तविक: यसमा वास्तबमा तर्साउने भूत एवं पूर्खाको लिङ्ग देहद्वारा निर्मित हुन्छ ।
काल्पनिक : यसमा व्यक्ति घरमा भूतले तर्साउछ भनेर कल्पाना गर्छ अथवा भ्रमित हुन्छ ।
अन्य : यसमा घर भूतले तर्साउने प्रतीत हुन सक्छ जुन निवासको रचना, भू:खण्डको परिवेश अथवा त्यहाँ रहने व्यक्तिको विचार आदि द्वारा निर्मित नकारात्मक तरङ्गको कारण हुन सक्छ ।
यस स्तम्भ (column) ले भूतले तर्साउने वास्तविक हो, काल्पनिक हो अथवा मात्र नकारात्मक स्पन्दनसँग सम्बन्धित हुने सम्भावना दर्शाउछ ।
आेझा, तान्त्रिक, मान्त्रिक, आध्यात्मिक उपचारक, पुजारी अथवा मनोरोग विशेषज्ञद्वारा भूत हटाउने सम्भावना अल्प हुन्छ ।
यसको अर्थ हो कि ३० प्रतिशत व्यक्तिहरु जसलार्इ काल्पनिक स्तरमा लाग्दछन् कि त्यहाँ भूतले तर्साउछ अनि कुनै आेझा अथवा भूत हटाउने व्यक्तिद्वारा परिसरको शुद्धि गरेपछि मानसिक स्तरमा लाग्दछ कि त्यहाँ बाट अनिष्ट शक्ति हटेर गयो । यस प्रकार १० प्रतिशत व्यक्तिहरुलार्इ पनि केहि फार्इदा देखाइ दिन्छ यदि बाधा नकारात्मक तरङ्गको कारण थियो न कि कुनै भूतको कारण ।
साधना (आध्यात्मिक अभ्यास) जुन साधनाको ६ मूलभूत सिद्धान्त अनुसार गरिनाले अनिष्ट शक्तिको स्थार्इ रुपले त्यस स्थानबाट हटाउन सकिन्छ ।